ကိုယ်ပွား Techniques ၏မတူညီသောအမျိုးအစားများ
ကိုယ်ပွားဟာသူတို့ရဲ့မိဘမှဗီဇတူညီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးအနွယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရာတိရစ္ဆာန်များ asexually မျိုးပွား သဘာဝကျကျထုတ်လုပ်ဖြစ်ကြောင်း Clone ဥပမာဖြစ်ကြသည်။
တိုးတက်လာဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် မျိုးရိုးဗီဇ သို့သော်ကိုယ်ပွားလည်းအချို့သောကိုယ်ပွားနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. သူတွေဟာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ပုံတူပွားခြင်းနည်းစနစ်အလှူရှင်မိဘမှဗီဇတူညီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးအနွယ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရစ္ဆာန်များ၏ Clone အတု Twin နှင့် somatic ဆဲလ်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ အဆိုပါ somatic ဆဲလ်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုမူကွဲရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ Roslin နည်းစနစ်များနှင့်ဟိုနိုလူလူနည်းစနစ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလှူဒါန်းခဲ့သည်နျူကလိယဟာအငှားတစ် somatic ဆဲလ်ကနေယူတတ်၏မဟုတ်လျှင်ထိုအနည်းစနစ်များအားလုံးအတွက်ရရှိလာတဲ့အမျိုးအနွယ်, အလှူရှင်မအငှားဖို့ဗီဇတူညီပါလိမ့်မည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
Somatic Cell နျူကလီးယားလွှဲပြောင်း
အဆိုပါအသုံးအနှုန်း somatic ဆဲလ်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်း၏အပြောင်းအရွှေ့ကိုရည်ညွှန်းသည် နျူကလိယ ဥဆဲလ်တစ် somatic ဆဲလ်ကနေ။ တစ်ဦးက somatic ဆဲလ်တစ်ပိုးဆဲလ် (ထက်အခြားကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်ဆဲလ်ဖြစ်ပါတယ် လိင်ဆဲလ် ) ။ တစ်ဦး somatic ဆဲလ်တခုရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် , အသွေးဆဲလ် , နှလုံး ဆဲလ်, အရေပြားဆဲလ် , etc ..
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ, နျူကလိယ တစ်ဦး somatic ဆဲလ်များကိုဖယ်ရှားနေသည်နှင့်၎င်း၏နျူကလိယကိုဖယ်ရှားခဲ့သည့်မဖောက်ရသေးသည့်ကြက်ဥထဲသို့ဖြည့်စွက်။
အဆိုပါ Roslin နည်းစနစ်
အဆိုပါ Roslin နည်းစနစ်ဟာ Roslin Institute ကသုတေသီတွေကကတီထွင်ခဲ့ somatic ဆဲလ်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်းတစ်မူကွဲသည်။
အဆိုပါသုတေသီများဒျေါလီကိုဖန်တီးရန်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်, (အလိမ္မာအတွက်အရေးပါနှင့်အတူ) somatic ဆဲလ်တွေကြီးထွားခြင်းနှင့်ကိုဝေရန်ခွင့်ပြုထားပြီးတော့တစ်ဦးကိုဆိုင်းငံ့သို့မဟုတ်မြုံဇာတ်စင်သို့ဆဲလ်သွေးဆောင်ဖို့အာဟာရဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။ ယင်း၏နျူကလိယကိုဖယ်ရှားခဲ့သည့်ဥဆဲလ်ထို့နောက် somatic ဆဲလ်ဖို့နီးကပ်နီးကပ်ထဲတွင်နေရာနှင့်နှစ်ဦးစလုံးဆဲလ်တစ်ခုလျှပ်စစ်သွေးခုန်နှုန်းနှင့်အတူအံ့အားသင့်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆဲလ်ဖျူးနှင့်ကြက်ဥတစ်ဦးသန္ဓေသားသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါသန္ဓေသားထို့နောက်အငှားသို့ထညျ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဟိုနိုလူလူနည်းစနစ်ဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာ Teruhiko Wakayama ကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီနည်းလမ်းမှာတစ်ဦး somatic ဆဲလ်များမှနျူကလိယကိုဖယ်ရှားနေသည်နှင့်၎င်း၏နျူကလိယကိုဖယ်ရှားခဲ့သည့်ကြက်ဥသို့ထိုးသွင်း။ ကြက်ဥဓာတုဖြေရှင်းချက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ချိုးနေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားထို့နောက်အငှားသို့ထညျ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းစနစ် somatic ဆဲလ်နျူကလီးယားလွှဲပြောင်းပါဝင်နေစဉ်, အတု Twin မ။ artificial Twin ကပါဝင်ပတ်သက် fertilization အမျိုးသမီး၏ gamete (ကြက်ဥ) နှင့်ရရှိလာတဲ့၏ခွဲခြာ သန္ဓေသားဆဲလ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်၌တည်၏။ တစ်ခုချင်းစီကွဲကွာ ဆဲလ် ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်နှင့်တစ်ဦးအငှားသို့ထညျ့နိုငျသညျ။
ဤရွေ့ကားဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားနောက်ဆုံးမှာသီးခြားတစ်ဦးချင်းစီဖွဲ့စည်း, ရင့်ကျက်။ သူတို့မူလကတစ်ခုတည်းသန္ဓေသားကနေကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ဦးချင်းစီ၏အပေါငျးတို့သသည်ဗီဇတူညီကြသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုသဘာဝကအမွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဆင်တူသည်။
သုတေသီများသည်ဤနည်းစနစ်သုတေသနနှင့်ကုသလူ့ရောဂါများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇလူ့များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များပြောင်းလဲများတွင်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ပရိုတိန်း နှင့်အစားထိုး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ ။ နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောလျှောက်လွှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်စရိုက်များနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်သည်။
မျိုးဗီဇ Dominic ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရာကဘာလဲ Is
ခွဲခြားမှု၏ Mendel ရဲ့ဥပဒေ
ဘယ်လို Gene mutation အလုပ်လုပ်
လွတ်လပ်သောဌန်၏ Mendel ရဲ့ဥပဒေနိဒါန်း
လိင်-လင့်ခ်လုပ်ထားသောလက္ခဏာရပ်တွေနှင့် Disorders အကြောင်းလေ့လာပါ
အတ္တလန္တိတ် Sun ကညီလာခံတက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
တစ်အိတ်နှင့်တူသောအတွက်လက်ငင်း Sorbet Make ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါသမိုင်း Barbie ၏ရုပ်
ကမ္ဘာ့ဖလား Changed 10 အဆောက်အ
BP: ဘယ်လိုရှေးဟောင်းသုတေသီအတိထဲသို့နောက်သို့ Count သလား?
သင်ကဂျိန်း Austen အကြောင်းသိထားသည်မဟုတ်7အရာ
အဆိုပါ Gap ခုနှစ်တွင်ဖြည့်ဖို့ ESL ဝေါဟာရလေ့ကျင့်ခန်း
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Conoscere" Conjugate လုပ်နည်း
ဘယ်လိုဘာသာတရားနှင့်သိပ္ပံနက်နဲသောအရာအားဖြင့် Driven နေကြသနည်း
Hip-Hop ၏ elements
Wuji (ဝူ Chi), အ Tao က၏ Un-ကျမှုကိုထငျရှားရှုထောင့်၏အဓိပ်ပာယျ
အကောင်းဆုံး Drawing မှင်အမှတ်တံဆိပ်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Winsor & နယူတန် Paint စက်ရုံအတွင်းပိုင်း
သင်ကကောလိပ်ဌာနေလက်ထောက် (RA) ဖြစ်လာသငျ့သလော
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ရေနွေးအိုး Creek အဘိဓါန်၏တိုက်ပွဲ